खुट्टा भए जुत्ता कति कति ! | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » टिप्स » खुट्टा भए जुत्ता कति कति ! 28
खुट्टा भए जुत्ता कति कति ! हरेक महिलाको चाहना आकर्षक र खिरिला खुट्टा हुन् भन्ने हुन्छ । शरीरको बोझ पनि धान्ने हुनाले खुट्टा चाँडै थकित हुन्छ । त्यसका लागि ताजा फलफूल खानु राम्रो हुन्छ । यसका लागि स्ट्रवेरी, काँक्रो, मुला जस्ता पानी बढी पाइने फलफुल राम्रो मानिन्छ । त्यस्तै खुट्टाको सुन्दरताकालागि बढी पानी पिउनु पनि उत्तम मानिन्छ ।
सुन्दर खुट्टाकालागि ओमेगा ३ फ्याट्टि एसिड भएका खानेकुरा उपयुक्त मानिन्छन् । खुट्टा सुन्दर बनाउन घिटामिन ‘ई’ पाइने लोसनले मालिस गर्नु राम्रो मानिन्छ । खुट्टाको स्याहारसँगै हलुका जुत्ता वा चप्पल प्रयोग गर्नुपर्छ । खुट्टा बांगिने सम्भावना भएकोले हिल जुत्ता प्रयोग गर्नु हुँदैन । खुट्टा दुखेको वा हलुका सुन्निएको छ भने मन तातो पानीले धोएर कागतिको रसले मालिस गर्दा फाइदा पुग्छ । सुत्नुअघि एक चम्चा ग्लिसिरिनमा एक चम्चा दूध मिलाएर खुट्टाको मालिस गर्दा खुट्टाको छाला कोमल देखिन्छ ।
खट्टाको सुन्दरतामा छाला बाहेक नङ पनि सफा र सुन्दर हुनुपर्छ । त्यसैले सुन्दरताकालागि समयमा नङ काट्ने र त्यसमा रहेको फोहोर पनि निकाल्नु पर्छ । महिलामा खुट्टाको सुन्दरताका लागि रौं पनि बाधक बन्नसक्छ । त्यसैले खुट्टाको रौं पनि सही तरीकाले निकाल्नु पर्छ । खुट्टाको रौं विद्युतीय सामग्री, क्रिम वाक्सिङ वा थ्रेडिङ गरेर निकाल्न सकिन्छ । सकभर खुट्टाको रौं निकाल्दा पार्लर गएर अनुभवी व्युटिसियनवाट रौं उखेल्नु राम्रो हुन्छ ।
चिसो मौसममा खुट्टाको कुर्कुच्चा पनि बढी फुट्छ । यसले खुट्टाको सुन्दरता मात्र विगार्दैन, दुखाई पनि हुन्छ । कटनको मोजा प्रयोग गर्ने, सुत्नुअघि मन तातो पानीमा खुट्टा डुवाउने र जैतुनको तेल वा राम्रो व्रान्डको ग्लिसिरिनले मालिस गर्दा खुट्टा फुट्ने समस्यावाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
Homepageहेर, डाक्टरी विद्यार्थीको विजोग !डाक्टर साहेब, कहाँ गयो इथिक्स ?लापरवाहि गर्ने चिकित्सकलाई अदालतको कारवाहिकाउन्सिलमा पास विशेषज्ञ डाक्टरको नामावलीडा. कोइरालाको राजीनामाको थप रहस्यबिरामीको ब्यापार गर्न पाइँदैनन्याम्सको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिकहेल्थ अवार्डस्वास्थ्यले असमानता बढाएको छ : गगन थापा